Oonobumba besiKhuselo kunye nokuValwa abavelisi kunye nabaxhasi - China ooCaps kunye nokuValwa kweFektri
Sineenkcukacha ezahlukeneyo zeeplastiki ze-aluminium. Ingakumbi yenziwe ngegolide nesilivere, eminye imibala nayo inokwenziwa. Ingasetyenziselwa njengesiciko seebhotile zeplastiki kunye neebhotile zeglasi, kwaye ukubonakala okuphezulu kuhlala kugcina umfanekiso omnandi. Ububanzi besicelo: ingqayi yokutya, ingqayi yezithambiso, ijagi yeelekese, ukupakisha amayeza, ukupakishwa kwesipho ngokugqibeleleyo. Ikepusi kunye nomlomo webhotile unentsebenzo entle kakhulu yokutywina, esempilweni, ekhuselekileyo kwaye yomelele emoyeni. I-gasket yokutywina ibekwe ngaphakathi, ekulula ukuyisebenzisa. Iplastikhi yeglasi yeglasi yokuthambisa into ekuthiwa yi-antibacterial, ikhuselekile kwaye inobuhlobo kwindalo, intle kwaye ihambelana.
PP abantwana iminqwazi zeplastiki ubungqina
Ukucaciswa okuhlukeneyo kwesiciko seplastikhi seP Ingasetyenziswa njengeeminqwazi yeebhotile zeplastiki kunye neebhotile zeglasi, kwaye ukubonakala okuphezulu kuhlala kugcina umfanekiso obalaseleyo. Ububanzi isicelo: ingqayi yeplastiki, ingqayi cream, ingqayi yokugcina, isiqholo ingqayi, ingqayi cookie, iingqayi zeplastiki umlomo ebanzi. Ikepusi kunye nomlomo webhotile unentsebenzo entle kakhulu yokutywina, esempilweni, ekhuselekileyo nengangeni moya. I-gasket ibekwe ngaphakathi, ekulula ukuyisebenzisa. ingqayi yeplastikhi yokutya izinto zokulwa neentsholongwane, ikhuselekile kwaye inobuhlobo kwindalo, intle kwaye ihambelana.
I-20-410 yeplastiki efanelekileyo ye-Mist Sprayer ene-Hood ecacileyo- Isiphumo se-0.15cc se-10 Dip Tube
I-18-410 Black Rib Side Side ye-Spine Sprayers esineyona njongo iphambili yokuhambisa iimveliso zokwenza isicelo ngobumnene. Inkqubo yokuhambisa ifaka i-10-dip-tube kunye nokuhambisa i-0.15cc ngokusebenza kwenkungu ekhanyayo, efanelekileyo yokhathalelo lobuqu kunye neemveliso zobuhle. sebenzisa. Amacala ombambo wokuvalwa enza kube lula ukususa kunye nokufaka kwizikhongozeli.
I-18-410 flip Iplastiki yeCap-0.310 yokuvula i-Orifice
Ngokuqhelekileyo kufumaneka kwi-shampoos, i-lotions, i-gel gels kunye nolunye ukhathalelo lomntu kunye neemveliso zokunakekelwa kwezilwanyana. Itekhnoloji ye-Crab claw yokutywina itywina iibhotile ezininzi zeplastiki ezinentamo eyi-18-410 ukuya kuthi ga kwinqanaba eliphezulu. 0.310 opening ukuvula i-orifice.
I-108-400 ye-White Rib Side Side ye-Mat ephezulu yeplastiki yePlastiki eqhubekayo
Ngaphezulu kwesisombululo sakho esipheleleyo sephakheji kunye ne-108-400 yecala elimhlophe leplastiki yeplastiki evaliweyo. Ububanzi obubanzi be-M108mm bulungele izikhongozeli zomlomo ububanzi ezinje ngeplastiki kunye neengqayi zeglasi. Amacala ombambo enza isicelo kunye nokususwa kokuvalwa kube lula. I-liner ikwasebenza njengesixhobo sokunciphisa ukufuma, ukuthintela ukufuma ekuphumeni okanye ekungeneni kwesikhongozelo esinokuphazamisa ukuthembeka kwemveliso.
Iiplastiki zeplastiki ezingama-24-410 ezimhlophe zifakela isiciko
Ingxowa yethu yomlomo omde ihlala ixesha elide ukuze isetyenziswe kwaye kulula ukuyicoca. Sika kubungakanani beengcebiso qala kancinci kwaye uvumele ukuba usike incam kubungakanani obulingana neemfuno zakho. Ikuvumela ukuba usasaze ngokuchanekileyo nokuba uhambisa ioyile okanye ibetter pancake. Vele ucofe incam ukuze ulingane neemfuno zakho. Ogqibeleleyo BBQ, uhambo inkampu kunye much more.It isebenzisa eco-friendly grade ukutya zeplastiki, ethambileyo kwaye kulula ukuba extrude. Ngapha koko, has a umhlwa olomeleleyo, acid kunye nokumelana kwealkali. Kufuneka ukuba ube ngumncedisi olungileyo ekhitshini.Utywinwe, ukumelana nobushushu obuphezulu, ukungangeni manzi, ubunzima obuncinci.Ukulungiselela ukuhanjiswa kweetchup, lwemostade kunye nokunxiba kwiisendwitshi nakwiisaladi. Oonobumba bathintela ukuchitheka kwaye bagcine imixholo intsha, kulula ukuyigalela, ukuleyibhelisha, nokuchonga izinto ozithandayo, okanye naluphi na ulwelo kubandakanya ipeyinti yobugcisa kunye nezisombululo zokucoca.
Baby Bottle uqinisa Clip Non Slip izibambo Holder Sterilizer amahlwempu Ubushushu Resistance
Ubushushu bebhotile yokubulala iintsholongwane kunye neebhotile zebhotile. Isiphatho esenziwe ngokukodwa esinegophe kunye nepateni engatyibilikiyo emhlathini inokubamba ngokulula iibhotile, i-pacifiers, umkhenkce okanye esinye isandla kunzima ukuthatha izinto ezincinci. impilo, imveliso inokumelana ne-110 ℃.